के हो एयरपोर्ट काण्ड ? सीइओमाथि कारवाही किन हुँदैछ ?
काठमाडौं । पर्यटन मन्त्रालयले त्रिभुवन विमानस्थलमा भएको घटनालाई लिएर पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) धनञ्जय रेग्मीलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । रेग्मीले शनिबार लन्डनबाट फर्किने क्रममा त्रिभुवन विमानस्थलमा भन्सारका कर्मचारीलाई हातपात गरेका थिए ।
स्रोतका अनुसार पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेको निर्देशनमा मन्त्रालयले तीन दिने स्पष्टीकरण सोधेको हो । मन्त्री आलेले रेग्मीलाई मन्त्रालयमा बोलाएर घटनाबारे सोधपुछ समेत गरेका थिए । रेग्मीबाट चित्तबुझ्दो जवाफ नआएपछि उनले सचिव यादव कोइरालालाई लिखित स्पष्टीकरण दिन निर्देशन दिएका हुन् ।
लिखिच स्पष्टीकरण पनि चित्तबुझ्दो नआएको खण्डमा उनीमाथि मन्त्रालयले कारवाहीको तयारी गरेको छ । स्रोतका अनुसार मन्त्रालय पहिल्यैदेखि रेग्मीको कार्यसम्पादनमा सन्तुष्ट थिएन ।
स्पष्टीकरणको जवाफ आएपछि उनलाई बोर्डबाट हटाउनेसम्मको तयारी गरिएको स्रोतले बतायो । मन्त्री आले र सचिव कोइरालासहित एउटा कार्यक्रममा भाग लिन रेग्मी लन्डन गएका थिए । फर्किने क्रममा त्रिभुवन विमानस्थलमा भन्सारका कर्मचारीले सोधपुछ गरेपछि विवाद भएको थियो ।
लण्डनबाट काठमाडौं आउने क्रममा शनिबार भन्सार विभागका कर्मचारीसँगको लफडामा मुछिएपछि सीईओ रेग्मीसँग पर्यटन मन्त्री आलेले यस विषयमा के भएको हो भनी जानकारी लिएका थिए । यो यात्रामा मन्त्री आलेसमेत सँगै थिए । सीईओ रेग्मीले शनिबार घटना भएको कुराकानीमा स्वीकार गरेका थिए ।
यद्दपि आफूले कर्मचारीलाई हात उठाएको विषय भने सत्य नभएको उनको दावी छ । मन्त्रालयले दुर्व्यवहार भएको भनिएका भन्सारका कर्मचारीसँग समेत टेलिफोनबाट घटनाबारे जानकारी लिएको छ ।
यसैबीच बोर्डले भने एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सामान्य घटनालाई उचालेर ठूलो बनाइएको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेको छ । कर्मचारीसँग भएको सामान्य भनाभनलाई हात हालेको भन्दै उचालिएको र सीईओले मापसे सेवन गरेको विषय समेत झुट रहेको बोर्डको दावी छ ।